I-algorithms yeminwe ye-WEDS iphuculwe ngokuqhubekayo ngaphezu kweminyaka engama-20 ukuze kuphunyezwe ukuqondwa kophawu lweminwe olukhawulezayo noluchanekileyo lwe-1:1 & 1:N.
I-algorithm iyahambelana nomfundi weminwe optical kunye ne-capacitive kwaye inokulungiswa kwiimveliso ezahlukeneyo, ukufezekisa ukuhlukahluka kwemveliso.
Ithala leencwadi elikhulu le-300,000, i-ISO 19794 ehambelanayo, ingasetyenziselwa iminwe yabathengi abadala, ukuphumeza ukudluliselwa kwedatha okungenangqiqo.
1. Ubuchule obunamandla bokusebenzisa
Iyakwazi ukuqaphela ukufumanisa ngokukhawuleza phantsi kwee-engile zokubeka ezahlukeneyo kunye nokuma kweminwe.Kwiimeko ezintsonkothileyo zesicelo ezifana nokukhanya okungemva okuqaqambileyo kwefestile yokuqokelela, amabala eminwe, iminwe eyomileyo, iminwe emanzi, njl.njl., inozinzo olugqithisileyo kunye nokusebenza okugqwesileyo.
2. Chaza ngokuchanekileyo iSitoreji esikhulu
Iimpawu ze-multi-dimensional vector ezifana nezithuba, ukugoba kabini, kunye nokugoba kweenkozo kwiinkozo zinokuqaphela ukunakwa okuchanekileyo phantsi komthamo omkhulu wedatha yabasebenzisi ukuya kuma-300,000 okanye ngaphezulu.
3. Ukuthelekisa ngokukhawuleza
Ukusebenzisa imodi yokuthelekisa amanqanaba amaninzi, ngesiseko sokuqinisekisa isiphumo sokuthelekisa esizinzile, isantya sokuthelekisa ngokukhawuleza sinokufezekiswa.Okwangoku, isantya sokuthelekisa enye yePC eqhelekileyo inokufikelela kwisigidi esi-1 sesibini ngesekhondi.
4. Uzinzo olomeleleyo
Imodyuli ye-optical fingerprint recognition module inozinzo oluhle, amandla anamandla e-antistatic, ubomi benkonzo ende, ngokukodwa uvakalelo oluphezulu, kwaye inokubonelela ngemifanekiso yeminwe ephezulu.Itekhnoloji nayo yeyona iqolileyo.
Itekhnoloji yokuqaphela ubuso be-WEDS esekelwe kwiminyaka engaphezu kweshumi yophando olunzulu lwe-algorithm yokufunda, kunye nenani elikhulu lamava okuphunyezwa kwentsimi kunye nokulungiswa okuqhubekayo, kungekhona nje ukufezekisa ukufunyanwa kobuso obusisiseko, ukubonwa okuphilayo, ukuqaphela ubuso, kodwa kunye nokufunyanwa kwe-mask, ukufunyanwa kwe-helmet. , iimpawu zabasebenzi kunye neminye imisebenzi.Isenokugquma uluhlu olubanzi lweethowuni zesikhumba kunye namaqela eminyaka emininzi kuquka i-K12.
1. Ukufunyanwa ngokuchanekileyo kwindawo enzima
Ubunakho bokubona ubuso bugubungela iindawo ezininzi ezintsonkothileyo ezifana nokukhanya okuntsokothileyo, ukuvaleka kobuso, iiengile zobuso ezinkulu, kunye neentshukumo ezikhawulezayo.Ixhasa ifu, i-edge, kunye ne-end-to-end-to-end-to-end multi-platform solutions ukufezekisa imisebenzi yokukhangela ubuso obuchanekileyo, obuchanekileyo kunye nozinzile.
2. Ukubonwa ngokuphila
Iikhamera zokukhanya ezibonakalayo zisetyenziselwa ukukhusela kwi-infrared / emnyama kunye nohlaselo lweefoto ezimhlophe, kwaye iikhamera ze-infrared zisetyenziselwa ukukhusela kuhlaselo lweefoto zemibala.Ukufezekisa umsebenzi wokubona ubuso obukhawulezayo, obuzinzile kwaye obuthembekileyo.
3. Ukuphumeza iminyaka kunye nokuqatshelwa kwesini
Ngokusekelwe kwiminyaka echanekileyo kunye noqikelelo lwesini kwindawo yendalo exhaswa bubuso, impazamo yobudala yi-+/- 3.7 iminyaka, kwaye izinga lokuchaneka kwesini li> 99%.
4. Imaski / Umnqwazi / Ukuqaphela iindevu
Isakhiwo sothungelwano sokugqibela-so-ekupheleni sodidi olubini luyamkelwa ukuqonda imodeli yokufumanisa ngokukhawuleza ukuba ingaba ne-mask / isigqoko / iindevu, ezinokuthi zibone ngokuchanekileyo imiboniso yemaski yeentlobo ezahlukeneyo kunye neendlela ezahlukeneyo zokugqoka.
Njengomenzi wezixhobo zekhadi leminyaka engama-24, itekhnoloji yokuqondwa kwamakhadi eWEDS igubungela uninzi lweentlobo zamakhadi, ixhasa iiprothokholi ezahlukeneyo zeshishini kunye nezabucala, kunye neentlobo ezahlukeneyo zolungelelwaniso lomfundi wekhadi kunye namava oyilo olomeleleyo ukuhlangabezana nokufuna komsebenzisi. namava okuqaphela umgama omde.
1. .UkuNakana kwamakhadi amaninzi
Inkxaso yokusondela, i-NFC, i-CPU, i-HID / iclass, i-DESfire, i-Magnetic, i-Mifare njl.
2. IiProtokholi zoNxibelelwano ezininzi
Inkxaso ye-ISO14443A/ISO14443B/ISO15693 protocol, iMifare & DesFire, kunye ne-frequency ephantsi ye-125KHz iprotocol yokufunda kuphela.
3. Abafundi abaninzi
INkxaso yoMfundi kuyo yonke into-in-enye, i-Reader yangaphandle, i-Off-screen Reader, i-Magnetic stripe Reader, kunye ne-Plug-in Reader.
4. Ukuqatshelwa komgama omde
Umgama wokufunda ophezulu wethiyori ngu-8cm, sinokufikelela kumgama wokufunda we-3cm ukuya kwi-5cm kwiimveliso.
Itekhnoloji yokuqaphela ikhowudi ye-WEDS ixhasa ukuqatshelwa kweentlobo ezahlukeneyo zekhowudi, inokufezekisa ukuxinana okuphezulu kunye nolwazi oluphezulu lokuqatshelwa kwekhowudi ye-QR.Zombini ukunceda abathengi ukuba baphuhlise iiprothokholi zabucala, kodwa zinokusetyenziselwa ukudlula ngendlela, kulula ukufezekisa ujongano kwezinye iikhowudi.
1. Uhlobo lweeKhowudi ezininzi
Ibhakhowudi: Ikhowudi yeNkxaso 128, GS1 128, ISBT 128, Code 39, Code93, Code 11 njl. Ikhowudi ye-two-dimensional: Inkxaso yeKhowudi yeQR, iDatha yeMatrix, iPDF417 njl.
2. Isisombululo esiphezulu
Abafundi bethu banokuxhasa iikhowudi ezisombululo eziphezulu zokuguquguquka okukhulu kunye noluhlu olubanzi lwezicelo
3. Isimbo esahluliweyo / isimbo esiDityanisiweyo
Isimbo esiDityanisiweyo sithandeka ngakumbi ngobuhle.Isimbo esahluliweyo siyaqhawuka ukuze kube lula ukusebenzisa.
4. I-Private Protocol Docking
Siyazixhasa iiprothokholi zedokhi ngokudlula kwimowudi, kunye nokwahlulahlulwa kweendawo kwidokhi.
Njengoko ukulungiswa kwe-algorithms yokuqaphela ukukhanya okubonakalayo, i-WEDS iye yakwazi ukubonelela ngaphezu kwe-30 i-algorithms yokukhanya okubonakalayo ukuhlangabezana neemfuno zabathengi kwiinkonzo ezininzi kwiindidi ezine: ukucwangciswa, ukufunyanwa kwe-perimeter, uhlalutyo lokuziphatha kunye nokuqatshelwa kobuso kwinani elithile iimeko, kuquka uluntu, iipaki kunye nezakhiwo.
1. Uhlalutyo olusetyenzisiweyo lokuziphatha
Ukuqondwa okukrelekrele kokuziphatha okuthe ngqo kwizihlwele kunye nemiboniso, njengokusukelana, ukulwa, ukutshaya, ukunganxibi imaski, njl.
2. Ukucandwa komhlaba
Imimandla ethile inokuchazwa ngokweemfuno, njengezowuni zengozi, iindawo ezingadlulanga, njl.
3. ILayisensi yepleyiti yokuNakana
Ukuqatshelwa kunye nokurekhodwa kwemibala eyahlukeneyo yeenombolo zephepha-mvume kunye namanani.
4. Ukuchongwa koHlobo lweSithuthi
Chonga iindidi ezahlukeneyo zezothutho, ezinjengeemoto, iimoto zombane, iibhayisekile, izithuthuthu, njl.
Ukhuseleko lwabantwana luhlala lusengqondweni yabo bonke abazali.Nangona kunjalo, kwiminyaka yakutshanje, iingozi zokhuseleko lweebhasi zesikolo azinqabile, kubandakanywa neemeko zokuphambuka kwindlela, ukuhamba ngesantya, ukugcwala, njl., kukho namatyala abafundi kunye nabantwana abalibalekayo emotweni.Sizinikezele ekukhapheni abafundi kwiihambo zabo kwaye sinokubona umkhondo wesithuthi ngexesha langempela.Abafundi banokungena kwaye behle kwibhasi yesikolo ngoko nangoko ngokuthatha ifoto...
Phantsi komgaqo-nkqubo wokwakha uluntu oluvumelanayo, kuye kwaba ngumngeni omtsha kumasebe okhuseleko kunye nokhuseleko lwamacandelo abalulekileyo ukuphendula ubunqolobi kunye neemeko ezingxamisekileyo zempilo yoluntu, ukomeleza ulawulo lwangaphakathi lokhuseleko, ukuvala izithuba zokhuseleko kunye nokuqinisekisa ukhuseleko lomntu kunye nokhuseleko lwepropathi. abasebenzi."Ukubhaliswa kwabatyeleli okwenziwa ngesandla" kwaziwa ngokuba yinkqubo yokhuseleko lomntu: umgcini-sango ucela iindwendwe ukuba zibonise amaxwebhu azo...
Uhlaziyo lolungiselelo lolungiselelo lweyunivesithi yinxalenye ebalulekileyo yohlaziyo lolawulo lweyunivesithi, ngelixa ulawulo lweendawo zokulala zabafundi yinxalenye ebalulekileyo yohlaziyo lwenkqubo yolawulo lolungiselelo lweyunivesithi, enxulumene nendawo yokuhlala, umoya wokufunda nkqu nomgangatho wo imfundo nokufundisa kwabafundi.Imowudi yolawulo olubanzi kunye nemowudi yolawulo zezona ndlela zimbini zolawulo lwendawo yokulala yabafundi kwiikholeji nakwiyunivesiti...